Global Voices teny Malagasy · 15 Jona 2019
15 Jona 2019
Tantara tamin'ny 15 Jona 2019
Ho Afaka Jerena Any Anaty Lohamilina Fikarohana Ny Blaogin'ny Vondrom-piarahamonina
vondrom-piarahamonina15 Jona 2019
"Noalefahanay" ireo masontsivana ao amin'ny blaogin'ny vondrom-piarahamonina. Manomboka amin'ny 22 jona, ho voatanisa any amin'ireo milina fikarohana izy, izay hiantoka ny tena fahitàna kokoa momba ny asantsika!
Dika15 Jona 2019
Nivoatra ny Lingua Tiorka. Nila ezaka sy fotoana betsaka ny fananganana azy tany rehetra tany...Tsy maintsy lazaiko fa tena hatsaram-panahy avy amin'i ElGohary ny fanampiany nandritra ireo dingana ireo satria marobe ireo fanontaniana napetrako taminy.
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny May 2015) Ry GVers malala! Mientanentana ery aho hanambara ireo fiovàna goavana sasantsasany ato amin'ny ekipa Lingua misy antsika. Nandritra ny taona vitsy lasa, Paula Goes no toniandahatsoratra tamin'ny tenimpirenena maro tato amintsika, nisahana ny fifandraisana teo amin'ireo tarika Lingua sy ny trano fanoratana, no...
Namoaka ny bokin'i Nikola Grueski, praiminisitra teo aloha, ny trano nanonta ny ‘Mein Kampf’ an'i Hitler ho amin'ny teny makedoniana
Eoropa Afovoany & Atsinanana15 Jona 2019
Niteraka adihevitra tao amin'ny Foaran'ny Boky Skopje tamin'ny 8 May 2019 ilay mpamoaka boky iray avy any Makedonia izay fantatra amin'ny fanontàna boky momba an'i Nazi, noho ny famoahana boky avy amin'ny praiminisitra teo aloha sady mpandositra fitsarana - Nikola Gruevski.
Nandika lahatsoratra marobe aho ho anisan'ny ekipa GV Espaniola mpirotsaka an-tsitrapo, kanefa mbola misy lahatsoratra iray tsaroako noho izany nisy fiantraikany goavana tamiko .